Yaa lahaa qaladkii uu Goolku uga dhashay Chelsea kulankii Barcelona? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Published on February 20, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(21-2-2018) Gool uu xidiga Barcelona ee Lionel Messi shabaqa dhex dhigay ayuu barbar dhac ku soo celiyey tirsiga guushii koobaad ee Chelsea kulan is araga hore ah ku gaadho geggida Stamford Bridge ciyaar 16 dhamaadka Champions League.
Willian, oo laba kubadood oo hore birta garaacay qaybtii hore ee ciyaarta, ayaa Blues hogaanka ugu dhiibay kubad uu xerada ganaaxa dusheeda joog hoose ku duuliyey taas oo shabaqa giftinka ka soo gashay.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda tabobare Antonio Conte waxay ku sii negaatay rayn rayntaas 13 daqiiqo oo kaliya, ka hor intii aanu Andreas Christensen kubad dhiibasho ka khaldantay uu si qurux badan uga sii taabtay Andres Iniesta uguna gacan galiyey Messi, kaas oo isna si yaab leh u daba mariyey goolwade Thibaut Courtois.
Kulanka lugta labaad ee labada kooxood ayaa ka dhici doona geggida Nou Camp, 14 March ee xerunta kooxda hogaanka u haysa horyaalka La Liga , taas oo haysata fursada gacanta sare maadaama ay garoonkeeda meel ka baxsan gool ku dhashatay.
Natiijada ciyaartan geggida Stamford Bridge waxay ka dhigan tahay in mid kamid ah kooxaha ka socda Ingiriiskuay ku hadhi doonaan wareegan 16 dhamaadka.
Liverpool waxay ku tuntay Porto 5-0, Manchester City waxay ugu awood sheegatay Basel 4-0, Tottenham barbaro 2-2 ah ayay kula gashay Juventus halka Manchester United ay marti ugu noqon doonta Sevilla Arbacada, 21 February.